Xarunta leexinta CNC, Mashiinka Lathe CNC, Alaab-qeybiye & Soo-saareyaasha Shiinaha
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga1 / CNC leexinta Center, CNC Lathe Machine, qeybiye &-saareyaasha C ...
QIIMEYNTA SARE EE XARUNTA XARIIRTA CNC
Tsinfa waa soo saare xirfadle ah & soo saaraha mashiinka leexinta CNC ee Shiinaha. Xarunta leexashada ee CNC waxay leedahay shaqooyin dhameystiran, tayo sare oo mashiinada, iyo xawaare sare. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo qaybaha wareega, guud ahaan si toos ah ayey u dhameystiri kartaa dusha sare ee silsiladda, dusha sare ee dusha sare, dusha sare, qodista, jeexitaanka, iyo mashiinka miiqyada, sidoo kale way baaraandegi kartaa qaar ka mid ah dusha sare ee wareegga, sida hyperboloid. Dhidib fara badan ayaa lagu dari karaa iyadoo loo eegayo baahida: c dhidibka lathe, 3 dhidibka lathe, 2 dhidibka lathe, 5 dhidibka lathe CNC, 4 dhidibka CNC lathe.
Waxtarka sare: Xarunta leexashada ee CNC, ka dib marka qalabka wax lagu xiro hal mar, wuxuu dhameystiri karaa qaybaha leexashada, qodista, qodista, fiiqista, farsameynta miiqyada, iyo habraacyada kale ee wax lagu shaqeynayo.
Adag adag: Sariirta waxaa si gaar ah loola dhaqmaa si looga takhaluso isku buuqa gudaha ka jira.
Sax sare: Qalabka lathe ee CNC wuxuu si toos ah u adeegsadaa mootada adeegga si loo ogaado dhaqdhaqaaqa quudinta iyada oo loo marayo saxanka warqadda wadista iyo qalabka nasashada, sidaas darteed qaab dhismeedka nidaamka quudinta ayaa si weyn loo fududeeyay.
Su'aalo? ama qiimo u baahan?Naga soo wac lambarka + 86-15318444939, oo la hadal mid ka mid ah khubaradayada khubarada ah.Waxaad sidoo kale buuxin kartaa foomkeena xiriirka.
Mashiinka leexashada jiifka ah ee CNC:
Mashiinka leexinta TFA40 CNC
Dhexdhexaadiyaha wareegaya 400mm, sariirta 30/45 ee foorarsiga ah, saarista ku habboon ee ku habboon, qalafsanaanta adag
TFA40-S CNC xarunta leexashada 3 dhidibka
8 munaaradda cut magaabay, axdi qarameedka, qodista, jeestay, waa la baaraandegi karaa, barnaamijka CNC
TFA40B sariirta slant CNC lathe 2 dhidibka
Dhexroor Rotary waa 400mm, dhererka processing waa 500-1000mm, iyo mashiinka saarista chip waxaa loo isticmaali karaa si toos ah saarista chip.
TFA-8S CNC leexashada xarunta 4 dhidibka
8 xarunta laga rogo munaaradda qalabka, Afarta 90 madax awoodda korontada, Afar 0 madax xoog xagal
Xarunta leexinta ee TFA50 CNC
Taxane LTK mashiinka lathe CNC sariirta flat
qiimo jaban, dhexroor 360-16000mm, dhererka mashiinka 500-5000mm,
Qalabka mashiinka leexinta CNC:
Waxaan u habeyn karnaa hadba baahidaada, nala soo xiriir si aan u helno xalka iyo oraah
Faa'iidada mashiinka leexinta CNC:
Darajo sare oo otomaatig ah: Nidaamka CNC ee xakamaynta, sida ku xusan tiknoolajiyada waxqabadka ee barnaamijyada, habab badan ayaa lagu dhammeeyaa hal mar. Waxaa lagu qalabeyn karaa chuck hamiileed, kursiga dabada ee Haydarooliga iyo gacan robot ah oo si otomaatig ah wax u soo dejisa iyo u dejinta, taas oo si weyn u badbaadisa foosha isla markaana u horumarisa waxtarka wax soo saarka.
Ka-qaadista ku habboon: sariirta ikhtiyaariga ah, birta birta ayaa si dabiici ah ugu dhacdo sanduuqa qashin ururinta, waxaa lagu fulin karaa iyada oo loo marayo saarista qashinka silsiladda wareejinta.
Nabadgelyo wanaagsan: ilaalinta buuxda ee ku lifaaqan ayaa la qaatay.
Xawaare sare: Xawaaraha lagu qiimeeyo dunmiiqa waxaa laga heli karaa 1600 ilaa 4500 Rpm
Waa maxay xarunta leexinta CNC?
Caano dhaqameedyada caadiga ah ee loo yaqaan 'CNC lathes' waxay leeyihiin laba faasas, X iyo Z. Xarunta leexinta waxay leeyihiin faasas badan, 3 faasas, 4 faasas, 5 faasas, iyo wixii la mid ah. Marka lagu daro shaqada leexashada iyo qodista, waxay leedahay shaqada waxtarka sare. Waqtiyada isku xidhka iyo waqtiga ayaa yaraanaya.
Isku soo wada duuboo, xarunta leexashada ee CNC waxay leedahay astaamaha soo socda:
(1) Is waafajin xoog leh, oo ku habboon ka baaraandegidda qaybo badan oo kala duwan iyo qaybo yaryar.
Hawlaha lathe-dhaqameedka otomaatigga ama semi-otomaatigga ah qayb cusub, guud ahaan waxay u baahan yihiin inay hagaajiyaan qalabka mashiinka ama qalabka mashiinka, si ay u fududaato in la isticmaalo.
Qalabka mashiinka ayaa la jaan qaadaya shuruudaha qaybaha wax soo saarka, halka marka la isticmaalayo lathe CNC si loo farsameeyo qaybo ka mid ah qaabab kala duwan, waxay u baahan tahay oo kaliya dib u habeyn ama wax ka bedel habka wax lagu farsameeyo.
Barnaamijku (softiweerku) wuxuu si dhakhso leh u dabooli karaa shuruudaha ka baaraandegidda wuxuuna si weyn u gaabin karaa waqtiga diyaarinta farsamada ee lagu beddelayo qalabka mashiinka
Ku habboon noocyo kala duwan, hal xabbo, ama wax-soo-saar yar-yar.
(2) Qalabaynta mashiinka sare iyo joogteynta wanaagsan
Sababtoo ah isdhexgalka tikniyoolajiyada sare iyo kuwa cusub sida mashiinka iyo korontada, saxitaanka qalabka mashiinada mashiinka CNC guud ahaan wuu ka sareeyaa kan qalabka mashiinka caadiga ah. Horumarinta qalabka mashiinka CNC.
Nidaamka makiinadda waxaa gacanta ku haya kombiyuutarka sida ku cad barnaamijka gelinta hore, kaas oo ka fogaanaya heerka farsamo xumo ee hawlwadeenka.
Farqiga u leh tayada wax soo saarka oo ay sababeen kala duwanaansho. Qaar ka mid ah shaqooyinka shaqada oo leh qaabab isku dhafan, waa wax aan macquul aheyn qalabka mashiinka caadiga ah inuu dhameystiro.
Laakiin aaladda mashiinka CNC ayaa kaliya uruurisa barnaamijka isku dhafan ee adag si ay suurtagal u noqoto in la gaaro himilada, marka loo baahdo sidoo kale waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo barnaamijka kombiyuutarka lagu caawiyo ama kombiyuutarka si loo xisaabiyo
Ka shaqeynta kumbuyuutarka. Intaa waxaa sii dheer, habka mashiinka mashiinka mashiinka CNC saameyn kuma yeelanayo isbeddelada jireed iyo shucuureed ee hawlwadeenka.
(3) Waxay leedahay waxsoosaar sareeya iyo qiimaha waxsoosaarka oo hooseeya
Wax soo saarka aaladda mashiinka ayaa badanaa loola jeedaa waqtiga loo baahan yahay in laga shaqeeyo qeyb, oo ay ku jiraan waqtiga dhaqaajinta iyo waqtiga caawinta. tirada
Xawaaraha dunmiiqa iyo xawaaraha quudinta ee lathe-ka waxaa lagu xakamayn karaa noocyo kala duwan, waxaana la qaadan karaa qawaaniinta xawaaraha yar. Xawaaraha ugu fiican ee goynta ayaa la dooran karaa inta lagu jiro makiinadda.
Si loo hagaajiyo xuduudaha goynta, wax soo saarka si weyn ayaa loo hagaajiyaa,
Qiimaha wax-soo-saarka ayaa la dhimay, gaar ahaan qaybaha wax-soo-saarka ballaaran, dufcadda sii ballaaraysaa, ayaa hoos u dhigaysa qiimaha wax-qabadka.
Soosaarka ballaaran, gaar ahaan soosaarka tirada badan, wax-qabadka wax-qabadka iyo wax-ku-oolnimada waa in lagu xoojiyaa ujeeddada hubinta tayada wax-soo-saarka
Xasiloonida hawsha, tikniyoolajiyadeeda wax soo saar iyo halbeeg yar oo ka kooban ayaa ka duwan. Tusaale ahaan, xulashada qalabka, habka loo maro qalabka, iyo qalabaynta
Goobta iyo nidaamka loo adeegsanayo waa in si taxaddar leh loo tixgeliyaa, oo waxyaabaha ku habboon la soo bandhigi doonaa qaybta xigta.
Ka soo horjeedka wax soo saarka ballaaran waa wax soo saar hal-gabal ah. Muuqaalka ugu muhiimsan ee wax soo saarka hal-gabal waa in la hubiyo heerka ugu horreeya ee baasaska, gaar ahaan tayada hal mar.
Qaybaha leh qaabab isku dhafan iyo shuruudo sax ah. Marka labaad, marka la barbardhigo heerka guusha ee soosaarka hal shey. Wax soo saarka hal-gabal ah
Nidaamka NC ee loo adeegsaday wuu ka duwan yahay wax soo saarka ballaaran ee dhinacyada aaladda, qaabeynta qalabka, iyo dejinta barta beddelka qalabka. Iyo wax soo saar dufcadeed
Marka la barbar dhigo wax soo saarka, wax soo saarka hal-gabal waa in laga fogaadaa waqtiga diyaarinta wax soo saarka aad u dheer.
Maxay yihiin noocyada xarunta leexashada?
Xarunta leexashada guud ahaan waxaa loola jeedaa ku darista dhowr fallaadhi oo ku yaal lathe CNC, sidaa darteed lathe-ku ma aha oo keliya inuu leeyahay hawsha leexashada laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay hawsha wax shiida. 3 mashiinka leexinta axis, 4 dhidib, 5 dhidib.
Marka loo eego xagasha sariirta xagalkeeda, waxaa loo qaybin karaa xarunta gogosha sariirta oo fidsan iyo xarunta gogosha sariirta oo janjeedha.
Marka loo eego booska dunmiiqa, waxaa loo qaybin karaa xarunta leexashada toosan iyo xarunta leexashada jiifka ah.
Marka loo eego dhexroorrada kala duwan ee wareega iyo dhererka makiinadaha, waxaa loo qaybin karaa xarunta leexashada culus iyo xarunta leexinta iftiinka.
Waa kuwee badbaadada guud ee leexashada CNC?
In geeddi-socodka la jeestay xarunta leexashada CNC, waxyaabaha ugu muhiimsan ee badbaadada waa sida soo socota:
1.Markay dunidu isku rogto xawaare sare, dheecaanka goynaya wuxuu ku dul buufin doonaa qeybta shaqada ee wareegaysa.
2 Qalabka shaqada ee wareegaya, waxaa jira halista diidmada
3. Khatarta shoogga korantada ee ay keento baxsiga korontada
4. Qalad barnaamijka, oo keenay halista isku dhaca qalabka.
Marka la eego khataraha kor ku xusan, shaqaalaha waxaa looga baahan yahay inay raacaan buuga badbaadada ee hawlgalka
1. Xidho albaabka kahortaga inta lagu jiro makiinada si looga hortago in dheecaanku ka soo go'o inuu soo faafo
2. Markaad isticmaaleysid chuck la isku halleyn karo, hubi inaad hubiso oo aad xirtid xarkaha markii aad isku dhejineyso qalabka shaqada. Isla mar ahaantaana, xir albaabka difaaca, oo ha u istaagin si toos ah qeybta shaqada.
3. Adeegsiga korantada oo aamin ah iyo salka dhulka oo sax ah. Dayactirka qalabka koronto la'aan.
4 hubi nidaamka si aad u hubiso inuu sax yahay ka hor howsha.
Waa maxay badeecooyinka laga sameeyo mashiinka CNC iyo mashiinka leexinta?
- Alaabooyinka waxaa laga sameeyaa macdanta CNC
Qaybaha sanduuqa, qaybaha dusha sare ee adag
Sida dhammaan noocyada wax lagu buufiyo, giraanta hagaha dabaysha, dusha sare ee wareega, dhammaan noocyada dusha sare ee samaysmaya caaryada, qalabka wax lagu kiciyo iyo kuwa gaadhiga hoostiisa mara, iyo qaababka kale ee dusha sare ee qaab-bilaashka ah, qaybahaas waxaa lagu farsameyn karaa xarunta mashiinnada. Isku-darka isku-dhafan, caaryada la isku duro, caaryada caagga ah, caaryada sameynta faaruqinta, caaryada xumbo qaboojiyaha, caaryada tuurista cadaadiska, saxsanaanta caaryada, iyo wixii la mid ah
- Alaabooyinka waxaa laga sameeyaa mashiinka rogista
Lathe CNC wuxuu baari karaa alaabooyin badan, way adagtahay in mid mid loo taxo. Marka la soo koobo, lathe CNC badanaa wuxuu ku shaqeeyaa qaybaha leexinta, sida usheeda dhexe, gacmo, disk, iwm.
Waa maxay mashiinka CNC loo adeegsado leexinta qaybaha?
Rogitaanku waa nooc ka mid ah habka wax lagu farsameeyo ee shaqadu wareejiso oo mootadu ku waddo qalabka haysta oo ay ku waddo quudinta qalabka. Waxaa jira dhowr nooc oo lathe ah oo fulin kara farsamada noocaan ah:
CNC mashiinka lathe jiifka ah, CNC mashiinka lathe toosan, mashiinka leexinta CNC.
Noocee noocee ah ayaa lathe CNC u habboon yahay ka shaqeynta?
1. Wareegista qaybo leh qaab-dhismeed adag ama adag in la xakameeyo cabirka
Sababtoo ah xarunta leexashada ee CNC waxay leedahay shaqo isku dheelitirnaan toosan iyo wareeg ah, iyo qaar ka mid ah xarunta leexinta CNC waxay leedahay waxoogaa shaqeysiin aan dhex-dhexaad ahayn.
Iyada oo shaqeyneysa isdhaafsiga qalooca, waxay u rogi kartaa qeybaha wareega ee ka kooban wax kasta oo dusha sare ee qalooca ah, oo ay ku jiraan qeybaha iyada oo loo marayo xisaabinta ku habboon.
2. Qaybaha saxda ah ee saxda ah
Shuruudaha saxda ah ee qaybaha badanaa waxay tixraacaan shuruudaha saxda ah ee cabbirka, qaabka, booska, iyo dusha sare, kuwaas oo ka mid ahaanshaha dusha sare inta badan loola jeedo
qallooc dusha. Tusaale ahaan, saxnaanta cabbirku waa mid sare, qaybo silsilad leh oo leh shuruudo dheeri ah;
Qaybaha koonta oo leh shuruudo sare oo toosan, wareeg ah iyo u janjeedha khadka; qaybo leh shuruudo sare oo loogu talagalay astaanta khadka (qaab qaabeed wanaagsan)
On lathe CNC saxda ah, saxnaanta dhererka joomatari sidoo kale lagu farsameyn karaa mid aad u sarreeya.
3. Ka shaqeynta qalab adag oo adag
Falanqaynta caaryada waaweyn, waxaa jira qaybo badan oo leh cabbir weyn iyo qaab isku dhafan. Qaloocsanaanta qeybahan ka dib daaweynta kuleylka waa yar tahay.
Way adag tahay in la shiido qaybaha adkaaday sababtoo ah baaxadooda weyn,
Ku beddel shiidi adigoo u rogaya si aad u hagaajiso waxtarka hawsha.
Qayb 4.Work la hawl adag
Qalabka shaqadu wuxuu u baahan yahay inuu leexiyo wareegga kore, wajiga dhamaadka, jeexitaanka jeexjeexa dhinaca, qodista. Nooca noocan oo kale ah guud ahaan wuxuu ubaahan yahay seddex qalab mashiin si loogu farsameeyo, lathes, mashiinada wax shiida, mashiinada qodista, rarida iyo rarka alaabtu waa dhib badan tahay, waxaad iibsan kartaa xarun leex leexad ah oo lagu farsameeyo.
Qaybaha mashiinka leexinta CNC
Qalabka loo adeegsado inuu ku dhejiyo qalabka shaqada lathe waxaa loo yaqaan qalabka lathe.
Jadwalka Lathe waxaa loo qaybin karaa isku aadka guud iyo kuwa gaarka ah laba qaybood.
Qalabka Universal waxaa loola jeedaa isla qalab awood u leh inuu isku dhejiyo laba ama in ka badan laba nooc oo shaqooyin ah, tusaale ahaan, seddex daamood oo cufan, afarta daan daan, hawo guga, iyo mandrel caalami ah oo saaran lathe.
Qalabka gaarka ah waa qalab si gaar ah loogu talagalay in lagu farsameeyo shey cayiman oo nidaam gaar ah leh.
Haddii loo qaybiyo iyadoo la raacayo astaamaha isku dhafan ee qaybaha isugeynta, waxaa jira waxyaabo aan dib loo soo celin karin iyo qalab dib loo isugu soo laaban karo, kan dambe ayaa loo yaqaannaa qaab isku dheelitiran.
Qalabka leh tayada la isku halleyn karo ayaa damaanad qaadi kara tayada wax soo saarka, hagaajinta waxtarka waxqabadka iyo ballaarinta baaxadda isticmaalka qalabka mashiinka.
Shaqada lathe, inta badan isticmaalka qalabka shaqada ama meeleynta makiinada banaan.
Saddex-daan chuck, oo loo qaybiyay buug-gacmeed, koronto, oof-wareen, hawo-hidde saddex ah, iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha, waad dooran kartaa. U jeestay xarunta guud ee hawo-is-weydaarsiga isticmaalka badan, heerka sare ee otomaatiga. Ku habboon hawlgalka dufcadda.
Marka la barbardhigo lathes-ka caadiga ah, fiilooyinka CNC guud ahaan waxay isticmaalaan munaaradda qalabka CNC, oo loo qaybiyay qaabab toosan iyo toosan. Waxaa jira 4 saldhig, 8 idaacadood, iyo 12 saldhig oo laga kala xusho. Saldhigyada badan, qiimaha sare. Noocyada kala duwan ee wadista baabuurta waxaa loo qaybin karaa munaaradaha Haydarooliga iyo munaaradaha korantada. Guud ahaan, qiimaha taarikada midida korontada ayaa aad uga jaban. Adoo gelinaya barnaamijka nidaamka CNC, nidaamka waxsoosaarka waxsoosaarka CNC ee munaaradda gooyaha, aaladda tooska u badalaysa. Waxtarka sare.
Dabada iyo cufka ayaa wada shaqeynaya si loo hagaajiyo qaybta shaqada. Kursiga dabadu wuxuu leeyahay kursiga dabada gacanta, kursiga dabada ee Haydarooliga, kursiga dabada ee pneumatic.
Lifaaqyada ikhtiyaariga ah,
Mashiinka saarista Chip: Marka xarunta wareejinta la farsameeyo, duug ayaa la jari doonaa, taas oo ay fududahay in la ururiyo muddo dheer. Mashiinka mashiinka wax lagu gooyo ayaa loo isticmaali karaa ka saarida qori. Bir duug ah ayaa loo qaadi doonaa gaariga dibedda iyada oo loo marayo silsilad silsilad ah si loogu daweeyo midaysan.